स्टिभ हार्भे - Safal Stories
Home Motivational Biographies Art स्टिभ हार्भे
गल्ती अन्त्य होइन ।
स्टिभ हार्भे अमेरिकी हाँस्यकलाकार,टेलिभिजन प्रस्तोताका साथै रेडियोकर्मी पनि हुन् । उनको जन्म सन् १९५७ जनवरी १७ मा भएको हो । स्टिभ अमेरिकी मनोरन्जन जगतका एक उत्कृष्ट कलाकार मानिन्छन्।
स्टिभ हार्भेको जन्म अमेरिकाको वेस्ट भर्जिनियामा भएको हो । उनका बुवाको नाम जेसी हार्भे र आमाको नाम अलुइज भेरा हो । उनका बुवाले कोइलाखानीमा काम गर्थे। स्टिभ सानै उमेरको हुँदा उनको परिवार क्लिभ्ल्यांड,ओहिओमा बसाईसराइ गरेको थियो । उनले ग्लेन्भिल हाई स्कूलबाट आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि स्टिभ केन्ट स्टेट युनिभर्सिटी र वेस्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटीमा भर्ना भएका थिए ।
स्टिभ हार्भेले कलाकारितामा लाग्नु अगाडी धेरै किसिमका सानातिना जागिर गरेका थिए, जस्तै :इन्स्योरेन्स सेल्सम्यान , कार्पेट क्लिनर ,हुलाकी आदि । सन् १९८५ अक्टोबर ८ मा स्टिभले पहिलोपटक ओहिओ ,क्लिभ्ल्यांडको हिलारिटिज कमेडी क्लबमा आफ्नो हाँस्यकलाको प्रदर्शन गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसपछि सन् १९९० मा आयोजना भएको कमेडी प्रतियोगिता ‘ जनी वकर नेसनल कमेडी सर्चमा’ स्टिभले भाग लिएका थिए । त्यही सहभागिताले गर्दा उनलाई टेलिभिजनको म्युजिक टिभी शो “इट्स शो टाइम एट द अपोलो” को प्रस्तोता बन्ने अवसर समेत मिल्यो ।
स्टिभले टेलिभिजन जगतमा पाइला चालेपछि सम्भावना खोज्दै अगाडी बढ्न थाले । उनले सन् १९९४ मा एबिसी शो “मि एण्ड द बोएज” मा अभिनय गरे । आफूमाथी विश्वास राख्दै अगाडी बढेका उनी सन् १९९६ मा आफू प्रमुख भूमिकामा रहँदै टेलिभिजन शो “द स्टिभ शो” को प्रस्तोता बने । यो शो सन् २००२ सम्म प्रस्तुत भएको थियो र निकै चर्चित बनेको थियो ।
स्टिभ टेलिभिजनका साथै स्टेज शो हरुमा ‘स्ट्याण्ड-अप कमेडी’ गर्न थाले र दर्शकहरु बीच निकै लोकप्रिय बने । त्यतिबेला उनले विभिन्न स्टेज शोमा गरेका स्ट्याण्ड अप कमेडीको डीभीडी तयार भएको थियो जसको नाम थियो “द अरिजिनल किङ्ग अफ कमेडी”। सन् २००३ मा स्टिभले डब्ल्यु बि नेटवर्कबाट प्रसारण हुने नयाँ टेलिभजन शो “स्टिभ हार्भेज बिग टाइम च्यालेन्ज” लिएर आए । सन् २००५ सम्म प्रसारण भएको यो शो मा उनी कार्यक्रम प्रस्तोताका साथै हाँस्यकलाकार बनेर आफ्ना दर्शकलाई मनोरन्जन दिन्थे । त्यसैदौरान उनले एउटा किताब “स्टिभ हार्भेज बिग टाइम”पनि लेखे ।
स्टेज शो र टेलिभजनका साथै सन् २००३ मा स्टिभले दुई चलचित्र “द फैटिंग टेम्प टेसंस” र “रेसिंग स्ट्राइप्स”मा अभिनय पनि गरे । सन् २००८ मा किशोरहरुको पेशालाई केन्द्रित गरेर “द डिज्नी ड्रीमर्स एकेडमी” नामक शोको प्रस्तोता बने । यसको दुई वर्ष पछि उनले “फ्याम्ली फिउड” कार्यक्रम प्रस्तुत गरे र सन् २०१२ मा “सेलेब्रिटी फ्याम्ली फिउड पनि लिएर आए ।
सन् २००९ मा स्टिभले लेखेको किताब “थिङ्क लाइक अ लेडी,एक्ट लाइक अ म्यान” प्रकाशित भयो जुन निकै सफल रह्यो र सन् २०१२ मा सोहि किताबमा आधारित चलचित्र “एक्ट लाइक अ म्यान” रिलिज भएको थियो । सन् २०१२ अगस्ट १२ मा उनले स्ट्याण्ड अप कमेडी विधाबाट सन्यास लिँदै लस भेगसको एम जी एम ग्राण्डमा अन्तिम स्ट्यान्ड अप कमेडी प्रस्तुत गरेका थिए । यसको एक महिनापछि स्टिभले “स्टिभ हार्भे ” टक शो लिएर दर्शकमाझ प्रस्तुत भए जुन कार्यक्रम सन् २०१६ सम्म प्रसारण भएको थियो । सन् २०१६ नोभेम्बरमा उनले नयाँ शो “स्टिभ ” शुरु गरे।
टेलिभिजन र चलचित्रका साथै स्टिभ रेडियोमा पनि सक्रिय थिए । उनले संचालन गर्ने कार्यक्रम “द स्टिभ हार्भे मर्निङ्ग शो” हप्ताको एक दिन बिहानमा प्रसारण हुन्छ जुन सन् २००५ मा शुरु भएको थियो । सन् २०१५ देखि यता स्टिभ “द युनिभर्स बिउटी पेजेन्ट” का प्रस्तोता रहेका छन् । सन् २०१५ मा शुरु गरिएको कार्यक्रम “द लिटल शट्स” को तेस्रो सिजनको प्रिमियर सन् २०१८ मार्च १८ मा भएको थियो । स्टिभ उक्त कार्यक्रमका प्रस्तोता हुनुका साथै निर्माता पनि हुन् ।
स्टिभले सन् २०१५ मा मिस युनिभर्स प्रतियोगिताको उद्घोषक बन्ने अवसर पाए । मिस युनिभर्सको फाइनलमा उनले विजेताको नाममा कोलम्बियाकी सहभागीको नाम लिए । क्राउन लगाईदिइसकेपछि मात्र उनले थाहा पाए कि, उनले गल्ती गरे । मिस युनिभर्स कोलम्बियाकी नभएर फिलिपिन्सकी युवती भएकी थिइन् । त्यसपछि उनले स्टेजमै माफी मागे, सामाजिक संजाल मार्फत माफी मागे र अर्को वर्ष आयोजकलाई फिलिपिन्समा मिस युनिभर्स कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुरोध समेत गरे । त्यसपछि उनले फिलिपिन्समा भएको मिस युनिभर्स २०१६ को प्रतियोगितामा उद्घोषण गरे । त्यसै समयमा उनले अघिल्लो वर्ष आफूले गरेको गल्तीको लागि फिलिपिनी जनतासामु माफी समेत मागे ।
सन् २०१७ मा स्टिभले न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वेरबाट “न्यु इअर्स एभ स्पेशल” प्रस्तुत गरे जुन निकै सफल रह्यो ।
स्टिभ हार्भेले छ पटक सम्म “डे टाइम एम्मी अवार्ड” र चौध पटक “एनएएसीपी इमेज अवार्ड” जितेका छन् ।सन् २०११ मा उनले बेइ टि ह्युम्नीटरियन अवार्ड र सन् २०१३ मा सबैभन्दा मन पराइएको टक शो होस्टका लागि “थर्टीनाइन्थ्स पीपल्स चोइस अवार्ड” पाए । सोहि वर्ष उनलाई ‘स्टार अन द हलिवुड वक अफ फेम’ र ‘एनएबि ब्रोडकास्टिंग हल अफ फेम’ बाट पनि सम्मानित गरिएको थियो । सन् २०१५ मा स्टिभ हार्भेको बाल्यकाल बितेको क्लिभ्ल्यांडको गल्लीलाई “स्टिभ हार्भे वे” नाम दिईएको छ । सन् २०१६ मा अलाबामा स्टेट युनिभर्सिटी ले स्टिभ लाई मानार्थ डाक्टर उपाधिबाट सम्मानित गरेको थियो । सन् २०१७ मा हार्भेले टक शोको लागि र गेम शोको लागि गरि दुईवटा डेटाइम एम्मी अवार्ड पाए । त्यस्तै, २०१८ मा पनि उनले टक शोकै लागि एम्मी अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।
एउटा कुनै गल्ती भयो भने हामी हाम्रो जीवन नै सकिएको ठान्छौं । त्यही गल्ती हुने डरले आफ्ना पाइला अगाडी बढाउन सक्दैनौं । गल्ती हरेक व्यक्तिबाट हुन्छ । फरक यो हो कि, त्यो गल्तीलाई आफूले कसरि लिने ? त्यो गल्ती भइसकेपछिको परिस्थिति सम्हाल्नको लागि आफू कसरि प्रस्तुत हुने ? त्यो गल्तीबाट के सिक्ने र त्यहाँबाट अगाडी कसरि बढ्ने ?
Previousनयाँ अनुसन्धानको नतिजा : हरियालीमा २० मिनेट बस्दा हट्छ तनाव
Nextजिम रोनका प्रेरक भनाइहरु